Blog မှာ MYMC Radio ထည့်​ချင်​သူများအတွက်​ - .::just for share::.
Home » နည်းပညာ » Blog မှာ MYMC Radio ထည့်​ချင်​သူများအတွက်​
Blog မှာ MYMC Radio ထည့်​ချင်​သူများအတွက်​
Blog ​ရေးတယ်​ဆိုတာ တစ်​ကယ်​​တော့ မိမိကလူအများကို မိမိသိတာ​လေး​တွေကို ပြန်​မျှ​ဝေတဲ့သ​ဘောပါ။
အာ့လို မျှ​ဝေတဲ့ အခါမှာလဲ ကိုက လူ​တွေကို အ​ကောင်း​တွေ​ပေးမှာလား အဆိုး​တွေ​ပေးမှာလား
မိမိဘာသာဆုံးဖြတ်​ပါ။ မိမိလုပ်​ရပ်​ကအမြဲအ​နောက်​က​နေ အရိပ်​လိုလိုက်​​နေမှာပါ။ ဟုတ်​ကဲ့ ကျွန်​​တော်​တို့​တွေက​တော့ နိုင်​ငံ​ရေး ဘာမှန်းလဲမသိ ဘာသာ​ရေးလဲ
တစ်​လုံး​တောင်​မ​ရေးတတ်​ပါပဲ နည်းပညာ​တွေသီးသန့်​မျှ​ဝေ​နေခြင်း​ကြောင့်​ ​လေ့လာသူအ​ပေါင်းကိုလဲ
​ပေးနိုင်​တာဆိုလို့ ပညာပဲရှိပါတယ်​။လိုရင်းကိုမ​ရောက်​​တော့ဘူးရှည်​​နေပြီ ခ်​ခ်​ ကဲစလိုက်​ရ​အောင်​
သူငယ်​ချင်းတို့အ​နေနဲ့ မိမိတို့ blog ​လေးမှာ online radio ​လေးတစ်​ခု​လောက်​ထားခြင်းအားဖြင့်​
မိမိတို့ blog ကိုလာလည်​သူအ​ပေါင်းက စာ​တွေဖတ်​ရင်းနဲ့ မပျင်းရ​အောင်​သီချင်း​လေး​တွေ နားမ​ထောင်​​နေ​စေချင်​ဘူးလား။ လိုချင်​တယ်​ဆိုရင်​ဖြင့်​
​အောက်​မှာ​ရေး​ပေးထားတဲ့ Code ​လေး​တွေကို Copy ကူးပြီး
မိမိ blog ရဲ့  layout ထဲမှာ add gatget ထဲမှ html
ကို​ရွေးပြီး Paste လုပ်​လိုက်​ပါ။ လုပ်​ရတာလွယ်​​တော့ အ​သေးစိတ်​​တော့မ​ရေးပြ​တော့ပါဘူး​နော်​။
<span style="font-style:italic;"></span><span style="font-weight:bold;"></span><p style="text-align: center;"><a href="http://www.mymclub.net/main/radio/embed/html/mymcradio_aligned.html" onclick="window.open('http://www.mymclub.net/main/radio/embed/html/mymcradio_aligned.html','Current Song on the Radio!','width=450,height=410,left='+(screen.availWidth/2-225)+',top='+(screen.availHeight/2-205)+'');return false;"><img src="http://www.mymclub.net/main/radio/embed/images/radio_others.png" border="0" alt="What is current song?" title="What is current song?" width="300" height="120" /></a></p>
<object id="single1" style="width: 300px; height: 30px;" width="300" height="30" data="http://www.mymclub.net/main/jwsongs/player.swf" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="flashvars" value="duration=000&file=http://s7.viastreaming.net:9005/;stream.mp3&autostart=true&frontcolor=bababa&skin=http://www.mymclub.net/main/radio/embed/skins/nacht_new.zip" />
<param name="src" value="http://www.mymclub.net/main/jwsongs/player.swf" />
<param name="bgcolor" value="bababa" />